Mee Ka Ọdịnaya Gị Dị Ọhụrụ! Gụnyere Comments | Martech Zone
Emebeghị m ntụnyere 'isi na isi' nke post blọgụ edere na ụbọchị na nke na-enweghị ụbọchị gosipụtara. N'elu na DoshDosh, Achọpụtara m na ha nwere ụbọchị na nkọwa, mana ụbọchị ahụ abụghị ebe a ga-ahụ ya na post n'onwe ya. Ekwenyere m na nke a bụ ụzọ dị mma karịa blọgụ m, ebe m nwere ụbọchị gosipụtara nke ọma na URL ahụ yana ụbọchị eserese. Apụghị m ịgbanye elekere azụ ugbu a n’enweghị nnukwu ọrụ!
Azụmaahịa na teknụzụ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ nke na post blọgụ nke dị otu afọ agaghịzi aba na taa. Ọ bụrụ na m hụ ọkwa ole na ole na isiokwu, aga m ahọrọ ụbọchị kachasị ọhụrụ na mkpọ ma leghaara ndị ọzọ anya.
Peeji nke Igwe na Nchọgharị Nchọgharị
N'ezie enwere ọtụtụ ndị ọzọ na-eme nke a, nke m kwenyere na ọ pụtara ìhè na nsonaazụ ọchụchọ. Chọọ Google Blogsearch na nsonaazụ ndị a na-edozi na usoro usoro usoro. Ọbụna n'ime Google, ana m ahụkarị na isiokwu ndị ọhụrụ dị nso na nsonaazụ. Achọpụtala m ndị na - ede blọgụ ndị ọzọ na - enwekarị 'republish' ọdịnaya - isiokwu 2 fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ma otu bipụtara na nso nso a. Ọ bụ ezie na ọdịnaya ahụ yiri nke ọma, isiokwu ọhụrụ pụtara n'akụkụ elu!
Peeji ohuru n'ihi ịza ajụjụ
Enweghị m ike ikwenye na ọ bụ ihe ndabara na ihe ndị kachasị ewu ewu na blọọgụ m bụ ndị nwere usoro nkwupụta dịgasị iche. Onye ọrụ mepụtara ọdịnaya, dị ka ihe, 'nwetụ ume' na blog post site na-eme mgbanwe ọdịnaya na engines ọchụchọ wee regharịa. Na nkenke, ihe ị na-ekwu na-eme ka ọdịnaya gị dị 'ọhụrụ' nye ma ndị na-agụ ya yana injin nchọta.
Ikwu Ọrụ gbuo Freshness gị
Enwere ezi ihe a Buzz on na ole na ole ịza ajụjụ ọrụ si on na ahịa na-eme ezi an mmetụta. Ghọta teknụzụ ndị a dị mkpa, ọ bụ ezie!
Nsogbu bụ na Search Bot, usoro ihe omume nke engines ọchụchọ, bụ ọ bụghị ihe nchọgharị! Nchọgharị Nchọgharị ga - eme arịrịọ (D) maka ibe gị, ọ bụ ebe ahụ ka ọ kwụsịrị. N'agbanyeghị ole ọdịnaya dị ukwuu ma ọ bụ ọdịnaya dị ọhụrụ na-agbakwunye site na nkwupụta ahụ, Nchọgharị Nchọpụta amaghị ihe ebe ọ bụ na ọ rịọghị ozi ahụ. Ibe gi mere ochie ma echefuola.
Olile anya di!
Ọrụ ndị a bụ oke siri ike ma na-atọ ụtọ iji, yabụ anaghị m akụ ha kpamkpam. Onwe m, ekwetaghị m na atụmatụ nke sistemu ndị a karịrị uru nke ọdịnaya na-eweta site na njirimara njikarịcha. Ihe ndozi a bụ iji zụlite ihu mmemme ngwa ngwa maka ọrụ ndị a (F). Wayzọ a, sava weebụ m ka nwere ike igosipụta okwu maka onye ọrụ ma ọ bụ onye ọrụ nyocha yana saịtị m ga-erite uru na ya.
Site na ọrụ ole na ole ndị a na ahịa ugbua, ị ga-ajụ onwe gị:
kedu ka ị si achịkwa ma jikwaa ndị uda of gị ọdịnaya nke ahụ ha nwere?
Ọ bụrụ na ha apụọ n’ahịa, kedu ka ị ga - esi weghachite ozi ahụ? Ọ bụrụ n’ikpebie ịhapụ ọrụ ha kedu ka ị ga - esi weghachite ọdịnaya ahụ? Ọ nwere ike ịdị njọ!
Abụ m sọftụwia dịka onye ọrụ Ọzụzụ, yabụ ekwenyere m na elele nke ngwa ndị ọzọ dị ka nke a maka ijikwa usoro rụọ ọrụ nke ọma. N'okwu a, Achọrọ m ijide n'aka na m na-erite uru zuru oke site na nkọwa emere na blọọgụ m! Ọ bụrụ na ha gaa n'akụkụ ihe nkesa, enwere m ike inyefe ụfọdụ echiche, mana rue mgbe ahụ ana m achịkwa.
Tags: commentsọhụrụohuru ọdịnaya
Zere ịbụ ndị ndị njide gị jidere
Mee 12, 2008 na 12: 49 AM
Chaị, enweghị m ihe ngosipụta ọ bụla na-enye aka na mpụga ịbụ onye na-enye nkọwa (oge ụfọdụ). Daalụ maka ikenye ozi a Doug!
Mee 12, 2008 na 3: 24 AM
ị lebanụ SezWho?
Anyị na-enye ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ gbasara ọdịnaya ndị ọrụ mepụtara, agbanyeghị na anyị na-abawanye usoro nkọwa gị dị - anyị anaghị edochi ya. Ọ ga-amasị gị ịnweta nzaghachi gị…
Mee 12, 2008 na 8: 02 AM
M ga-enyerịrị ọrụ gị anya nke abụọ. Nwere ike ịchọ ịkọwapụta ọrụ gị na ndị ọzọ nke ukwuu! Echere m na ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na unu dị ka ndị ọzọ.
Mee 12, 2008 na 3: 48 AM
Nke ahụ bụ isiokwu na-akpali echiche. Echere m na enweghị ụbọchị na post na-enye ọtụtụ echiche, yabụ m na-emejuputa ya n'onwe m. Ọ bụghị na ike ime - nnọọ na ị imelite gị single.php ma wepu php zoro aka na ụbọchị.
Banyere ọrụ ịza ajụjụ, ọ dịtụghị mgbe m nyere ha echiche. Nanị m nwere nkọwa doro anya nke vanilla na-ekwu na saịtị m. Aga m echekwa na nke ahụ.
Mee 12, 2008 na 5: 11 PM
Are na-ekwu n’ezie na ọ dị mma iji wepu ụbọchị (ma ịchọrọ ịchọrọ) n’ihi na ụbọchị nwere ụbọchị na-ekpughe afọ nke ochie posts?
Yabụ ọ bụrụ na m kpochapụ ụbọchị ngaji na katọn mmiri ara ehi, ọ naghị emebi?
Biko hapu ubochi ndia (ha di nma na ebe a)… ka anyi ghara igba ndi ozo ume ka ha mee omume ojoo a. Ọ dị njọ maka ndị ọrụ yana n'ikpeazụ ndị na-eme ya ga-atụba ya n'ọnọdụ ọjọọ.
Rịba ama ndị na-ede blọgụ na-eme ya ugbu a: Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga n'ihu n'okporo ụzọ gaa na blọọgụ gị, gaa n'ihu na-ede ọdịnaya dị ukwuu. Adaberela na ndị ọrụ gị ịkwado okporo ụzọ gị.
Gburugburu gburugburu ụjọ vibes na-aga ebe a, Doug. 🙁
Mee 12, 2008 na 5: 47 PM
Put na-etinye ụdị ihe ọjọọ ahụ na ya. Agaghị m ekwu na emeghị ihe n'eziokwu. Doshdosh bụ oké saịtị na kediegwu ọdịnaya, ma ọhụrụ ma ndị ochie! Ekwenyere m na isiokwu ha 'na-edebeghị' na-enye ha ohere ịbịaru ogologo oge.
Ọ bụrụ na m dee edemede na usoro Excel ma ọ bụ nnukwu isiokwu, nsogbu bụ na Nchọgharị Nchọta na-achọta isiokwu 'ọhụụ' wee wepụ nke m n'akụkụ. Ndị mmadụ gara na saịtị m wee hụ na ọ dị otu afọ, ha na-achọkarịkwa ihe ọhụrụ - agbanyeghị na ọdịnaya m nwere ike ịka mma.
Nke a bụ ihe kpatara ya, ọ bụrụ na ị attentionaa ntị na ụfọdụ ndị na-ede blọgụ dị elu (iji ụbọchị), ha na-emegharịghachi ọdịnaya ha ugboro ugboro. Ọhụrụ ọdịnaya na-eme ka njigide igwe nchọta na - abịa - nke na - enye gị ohere ịme ka ọgụgụ akwụkwọ gị bawanye.
Ekwenyere m na gị, oke ọdịnaya ga-enwe mmeri mgbe niile. Naanị ihe m na-ekwu bụ na ị nwere ike itinye onwe gị na ọghọm site na 'ịnwụ' ọdịnaya nke ka kwesịrị ka e lebara anya!
Akwa okwu, Matt!
Mee 13, 2008 na 9: 45 AM
lol @ ihe ojoo. Nke ahụ bụ otu ihe m dị mma [ọjọọ?] Maka: ịhụ nke kachasị njọ na ihe niile. (Na ụlọ ọrụ mwube na ọ bụ ihe bara uru nkà, ọ evades ọjọọ PR… ya mere… M zụọ onwe m na-ahụ mkpari na ume kwa ụbọchị anya n'ihi na kasị njọ n'akuku… nke mere na-abụ ihe m bulie na.)
Enweghị m atụle ndị na-ede blọgụ na-agbanyeghachi ọdịnaya ochie ha dị ka ọkwa ọhụrụ iji mee ka ọ dị ọhụrụ. Aga m ahụ n'ezie ka a tụbara ha n'otu ọkụ ahụ. (Ikekwe ọkụ ka njọ, ọbụlagodi… dị ka ihe nzuzu nke omume ahụ bụ ihe doro anya.)
Na nzaghachi na Formkpụrụ Excel example ihe atụ… Ọ bụrụ na ndị blogger wụnye a 3rd ọzọ na-aza ajụjụ usoro na-ahapụ ụbọchị na ebe na chọrọ isiokwu na-anọ “ọhụrụ” M ga-atụ aro n'echebaraghị ya echiche na-emelite ahụ nke post ọ bụla 3-6 ọnwa. Gbakwunye ihe dịka "Mmelite: * Joe Schmo * ewepụtala ụzọ abụọ * * maka ịgbakọ ego eji akwụ ụgwọ." (Ebe ederede di na akara mmuke jikọtara ya) na-eduga na ọdịnaya / echiche ọhụrụ… dị ka mmeri-mmeri-mmeri. na-emeri, ndị na-agụ akwụkwọ gị na-emeri, ndị na-ede blọgụ ibe gị na-emeri. Ha bụ omume ọjọọ ọ bụghị n'ihi na ha bu ihe ọjọọ n'obi (dịka ịchigharị ọdịnaya bụ), mana n'ihi na enwere nhọrọ ndị nwere nnukwu elele maka mmadụ niile.)
Daalụ maka ndị na-esonụ kwuru. Aga m etinye aka na ndepụta nri gi ugbu a. 🙂
(PS ghara ịbụ nit-picky… ma ọzọ uber-peeve m nwere na 3rd ọzọ Comment Systems fix: My gara aga kwuru ugbu a nwere Text-njikọ-ad na ya. Dị ka onye edemede nke okwu ọ na-ewute m ịhụ m ikwu N'ihi na anaghị etinye ihe ndị dị ka Disqus n'ime ọdịnaya peeji ahụ n'oge arịrịọ mbụ ahụ na ihe nkesa na ha anaghị "agbanwe" site na nkwụnye ederede-njikọ-ad. hehehe. Agaghị m apụta nke a enweghị mmerụ, am. M ga-agbadata na akụkọ nke douglasskarr.com dị ka onye na-eme mkpesa / mkpesa. lol.)
Mee 13, 2008 na 10: 15 AM
Naanị iji nọrọ na nchekwa - nke ahụ bụ mgbasa ozi Kontera, ọ bụghị Ederede Njikọ Ed. 🙂 Kontera bu 'igwe ihe eji acho ihe'. Ederede Njikọ Mgbasa ozi bụ okpu ojii.
Ọ dịtụghị mgbe m chere echiche idebe ihe ndị a na-enweghị oke maka mgbasa ozi Kontera, mana echiche ahụ masịrị m. Aga m eme nke ahụ ebe a na nkeji!
ọdịnaya jide n'aka na ọkwa dị elu karịa, ọ bụrụ na weebụsaịtị nwere ụfọdụ bara uru ma dịkwa mkpa
ozi. Ọtụtụ ndị na-agụ akwụkwọ pụrụ iche ga-adọrọ mmasị na weebụsaịtị gị.